Ronaldo Nazario oo shaaciyey shanta xiddig ee uu daawashadooda ku raaxaysto, Messi oo hoggaaminaya, CR7 oo ka maqan & Hal laacib oo uu ka soo qaatay Premier League – Gool FM
Haaruun June 1, 2020
(Yurub) 01 Juun 2020. Halyeyga Brazil ee Ronaldo Nazario ayaa Lionel Messi u doortay xiddiga uu ugu jecel yahay daawashadiisa, isagoo meel iska dhigay xiddiga ay magac wadaagga yihiin ee Cristiano Ronaldo.
Waxaa jirtay dood aan dhammaad yeellan wali oo ku qotonta xiddiga ugu wanaagsan kubadda cagta xilligan, xilli Messi uu lix jeer ku guuleystay abaal marinta Ballon d’Or, halka Ronaldo isna uu shan jeer gacanta ku dhigay abaal-marinta kubadda dahabka ah, waxaana labadan laacib ay ka talinayeen saaxada kubadda cagta 12-kii sano ee la soo dhaafay.
Ronaldo Nazario oo lagu tiriyo xiddigihii ugu tayada badnaa kubadda cagta jiilkiisa, sidoo kalena laba jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa majaladda Isbaanishka ah ee AS waxay weydiisay xiddiga uu xiiseeyo hadda daawashadiisa, isagoo xulashadiisa ka reebay weeraryahanka Juventus ee CR7, waxaana taas baddelkeed uu ku soo daray xiddig u ciyaara kooxda Liverpool.
“Messi, dabcan, isaga ayaa lambarka koowaad ah, waxa uu leeyahay haybad qaadaneysa 20 ama soddon sano in la sugo iyada oo kale,” ayuu yiri laacibkii hore ee Real Madrid.
“Waxaan sidoo kale jeclahay (Mohamed) Salah, (Eden) Hazard, Neymar, waan jeclahay daawashadooda, dabcan, sidoo kale (Kylian) Mbappe.” ayuu doorashadiisa ku soo koobay Ronaldo.
Ronaldo ayaa sidoo kale iska fogeeyay in lala barbar dhigo kabtanka Portugal ee Cristiano Ronaldo, waxaana uu tilmaamay inay waxyaabo badan ka simman yihiin, balse shaqsi ahaan uusan jecleyn in ciyaartoy la is barbar dhigo.